hamidy any Ambalavao no notafihin'ny dahalo enin-dahy. Raha vao nahare izany ny polisim-pirenena miasa ao amin’ny kaomisaria Ihosy dia tonga nanome tanana ireo fokonolona tao Anjà, Fandrama, Ivily ary Ankazobetroka tamin’ny fanarahan-dia ka omby miisa 15 no azo ary tafaverina amin’ny tompony. Ny omby roa kosa novonoin’ireo dahalo ka navelan’izy ireo teny an-dalana, ny omby iray tsy hita izay nalehany. Ireo dahalo kosa vaky nandositra avokoa. Ny alin’ny 18 febroary teo indray tokony ho tamin’ny 11 ora tao amin’ny fokontany Mangarivotra, kaominina Tsiroanomandidy, faritra Bongolava, manamorona ny lalam-pirenena voalohany mankany Maintirano dia dahalo miisa 20 nirongo fitaovam-piadiana toy ny basim-borina calibre 12 no nanafika tao amina tokantrano roa samihafa. Lasan’ireo dahalo tamin’izany ny omby maromaro tao amin’ilay tanàna ary ilay lehilahy mpiasan’ny fahasalamana kosa naratra mafy. Taorian’ny antso voarain’ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria Tsiroanomandidy dia nandray ny andraikiny avy hatrany izy ireo tamin’ny fanenjehana sy ny fanarahan-dia ireo dahalo ka omby miisa 36 no tafaverina, ary ireo dahalo kosa lasa nitsoaka.